ko htike's prosaic collection: သားသုံးသား ရှင်းလင်းရေး နောက်ဆက်တွဲ
သားသုံးသား ရှင်းလင်းရေး နောက်ဆက်တွဲ
အများ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ နအဖက သူ့လမ်းစဉ်အတိုင်း သားသုံးသား ရှင်းလင်းရေးကို သေချာစွာ အကောင်အထည် ဖေါ်ဖို့လမ်းစဉ်ကို တစိုက် တမက်မက် လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
ကျောင်းသားတွေနဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို နှိပ်စက်၊ ညှင်းပမ်း သတ်ဖြတ်ပြီး ထောင်ထဲထည့်ရှင်းလင်း နည်းတွေကို သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တခါ ဘုရားသားတော်တွေကို သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီး ထောင်ထဲထည့်ပြီးတဲ့ အပြင် ကျောင်းကို အဓမ္မ သိမ်းယူတဲ့ အထိပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထင် ရဲရဲတင်းတင်း သာသနာတော်ကို စော်ကား ရှင်းလင်းနေပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး အနေနဲ့ကတော့ ကျန်နေတဲ့ စစ်သား(သံဃာတော်တွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့ အထဲမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင် ခဲ့တဲ့ စစ်သား)တွေကို ရှင်းဖို့သာ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒီတော့ .... ဘယ်လို ရှင်းမလဲ ....
ကျွန်တော်ကတော့ နအဖနေရာမှာ ခဏ ၀င်ပြီး Braistorming လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားမိပါတယ်။
အကြီးအကဲ ရာထူးရှိတဲ့ လူတွေကို မတန်မရာ အခွင့်အရေးပေးပြီး ပါးစပ်တွေကို ပိတ်ပါမယ်။ အကျင့်ဖျက်ပါမယ်။ ဒီတော့ အဆိုပါ ရာထူးရတဲ့လူက ရထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်မခံရလေအောင် နအဖကို သစ္စာစောင့်သိပါတော့တယ်။ သစ္စာ မစောင့်သိခဲ့ရင်လည်း သူတို့ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သုံးထားပြီးတာကြောင့် အကျင့်ပျက်နေပါပြီ။ အဲဒီလို အကျင့်ဖျက်ခံထားရပြီး အကျင့်ပျက်တဲ့ အတွက် အဲဒီ အမှုတွေနဲ့ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ၊ အလုပ်ဖြုတ် အရေးယူပါတယ်။ မိသားစု အထိပါ လိုက်လံ ဒုက္ခပေးပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ ရာထူး အကြီးပိုင်းကိုပါ။
နောက်တစ်ခုက ရာထူး မရှိတဲ့ အခြေခံ စစ်သားတွေ၊ သေနတ်ကိုင်ပြီး သံဃာတော်တွေကို ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေကို ရှင်းလင်းဖို့ကတော့ အခြားနည်းကို ကြံစည်ရပါတော့တယ်။ ဒါကတော့ အသက် အန္တရာယ်ပေးတဲ့ နည်းသာ ရှိပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သာမန် စစ်သားတစ်ယောက်ကို အခွင့်အရေး မပေးနိုင်လို့ပါပဲ။ ပေးခဲ့ရင် တပ်ထဲမှာ ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘယ်လို လုပ်ကြံမလဲ ...နည်းလမ်းဟောင်းကို ပြန်သွားရပါတော့မယ်။ ၈၈ အပြီး မဲသဝေါ၊ မာနယ်ပလော တိုက်ပွဲတွေကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ သေလိုက်တဲ့ စစ်သားတွေ တပ်တစ်ခုလုံးပါ ပြုတ်ခဲ့တာတွေ ... ။ အဲဒီတပ်တွေက ဘယ်က တပ်တွေပါလဲ .. ။ ၈၈မှာ ရှေ့တန်းက ပြည်သူတွေကို သတ်ခဲ့တဲ့ ၂၂ လို တပ်တွေပါပဲ။ အခု အခါ ၈၈ မှာ ပြည်သူတွေကို သတ်ခဲ့တဲ့ ၂၂ တပ်က လက်ကျန် စစ်သားဆိုတာ မရှိသလောက်ကို ဖြစ်သွားတာ အားလုံး အသိပါ။ သူတို့အတွက် အန္တရာယ် ပေးနိုင်တဲ့ စစ်သားတွေကို ဒီနည်းတွေနဲ့ ရှင်းပါတော့တယ်။
အခု အခါ ... နောက်ဆုံး သတင်းအရ KNU ကို ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြန်ပါပြီ။ သံဃာတော် တပါး KNU လက်ချက်နဲ့ ပျံလွန်တော်မူသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို သတင်းစားတွေထဲ အရှက်မရှိ လိမ်လည်နေပြန်ပါတယ်။ သတင်း မှန်၊ မမှန်ကို ကျွန်တော် မသုံးသပ်လိုတော့ပါ။ အနည်းဆုံး စက်တင်ဘာမှ ပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့တဲ့ သံဃာအရေ အတွက်နဲ့ သတင်းကို ဘာလို့ မထုတ်ပြန်ပဲ၊ အခုကျမှ ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ နယ်စပ်က သံဃာတော် တပါး ပျံလွန်တော် မူတာကို(မှန်ချင်မှ မှန်နိုင်ပါမည်။ သူတို့ သတ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။) ရေးကြီးခွင်ကျယ် သတင်းလုပ်ရေးနေရပါသလဲ .... ။ အဖြေက ရှင်းပါသည်။ တပ်မ ၆၆ ကို KNU နှင့် စစ်သွားတိုက်ခိုင်းရန် ကြံစည်နေသောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတော့သည်။ သားသုံးသား ရှင်းလင်းရေးနောက်ဆက်တွဲ စစ်သား ရှင်းလင်းရေး အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ ငှက်တကောင်ကို ခဲတလုံးနဲ့ ပစ်တယ်ပဲ ဆိုဆို၊ နအဖက တပြိုင်တည်း အလုပ် ၂ ခုကို လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ စစ်သားတွေကို ရှင်းလင်းရေးအပြင် ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ အဓမ္မလုပ်ကိုင်နေသော သာသနာ ဖျက်ဆီးရေး လုပ်ငန်းတွေကို သတိမမူမိအောင် အာရုဏ်လွှဲပြောင်းရန် တပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Phyo San said...
It'sanice Brainstorming! In future, please write qualitative news like this, giving not only information and also changing reader's attitude, thoughts & behaviour.
1 December 2007 at 03:21
good one!! we never thought about that.
Burma need to total change. But most came from the vision. And it is almost feel like real. Yes it is importance changes may come within next6months. If Army, monks, peoples and every body around the world can resist his voodoo plan we got back as normal Buddhism Burma. If not than we will get “A ye Gyi” era and all monks will become “A Ye Gyi” monks for future Burma. Let see why it can be happen.
Look like looking for cold blood killers (Commanders). He is not going to back out. He is already mad so he will do whatever to save his skin to win his last war. This is his last stand. He doesn’t have many cards in his hand. Only just last hard cards he is playing so dose not matter for him anymore. So he will kill more monks and peoples before he goes down to the drain in history.
Because of take over “Maggin” monastery and let the monks know that all monks will face similar faint if not given up and knee down to him. Presently many abbots (Sa Ga Na Ya Ka) are sleeping with him and defrocking the monks. I think many monks are getting feared. First if I’mamonk I fear for myself and faint too. Latter will get second though come in to save the Buddhism in Burma, which is to give up what army want. Remember Ball Ball Gyi Than Shwe came from psychological warfare school and he is doing as psychologically attacking the monks and peoples. So please noble monks don’t give up for him and “ Kyat Khat Waing” Ka Tone Gyi ( Sa Ya Daw). If “Kyat Khat Waing” Ka Tone Gyi takes over the Buddha law than True Buddhism in Burma is finish. Bending Buddha law monks Army will immense and it will go back to “A Ye Gyi” monks. Now already coming in force that whole Pago city has to offer the alms and moneys to “Kyat Khat Waing” Ka Tone Gyi by under Army knifes. It is trying to break the will of the Pago peoples and testing ground for further more extend to the whole Burma. First Alms(Sung) & moneys for forced donation. And latter “Midnight Blessing” at “Kyat Khat Waing” Ka Tone Gyi. If like that start happen even army officers will changing as monks for MIDNIGHT BLESSING”.
Well “Ta Ga Na Ya Ka” Buddha Blessing for you.
SORRY TO SAY THAT “ MIDNIGHT BLESSING” IS ONLY FOR LADIES, BECAUSE LADY FIRST.
We feel sorry for these soldiers? Let them die. If they don't want to die go and fight back their superiors. They have the choice.
and appoint all the Majors as the ambassdors and chase them out to the foreign countries ,not to be promoted asaarmy chief.
1 December 2007 at 15:07
PHONE PHONE U NAN DEE YA PAH YAR
KYAUNG KYAUNG AND BALL BALL GYAUNG ARE SLOWLY GETTING BUDDHA BLESSING SO THEY START ACTING LIKE A MAD DOGS. PLEASE STAY PEACE IN YOUR MIND SIR.
May be that Ka Tone Gyi (A Ye Gyi) is suppose to get safely made "MIDNIGHT BLESSING" at MAGGIN Monastery with Army Guard. But i think he cannot wait so what shall we say too much BAY LAY SUB IN HIS HEART.
Ma Ma Kyaung and Ball Ball Gyi chatting - Bay Lay Sub Bay Lay Sub - Bay Lay Sub and Bay Lay Sub.
(Please see down "BBG Than Shwe Voodoo Plan") NOW HE IS TAKING BACK HIS OWN MEDICINES- NOW HE AND "KYAUNG KYAUNG" MAKING TOO MUCH voodoo-yadaya. That mean to say BBG is psychologically depress so finding way out from voodoo-yadaya.
2 December 2007 at 21:01